ဘာသာပြန်​ထားတာ​တွေ ဖတ်​ကြည့်​ ကြက်​သီးထစရာ အဖြစ်​အပျက်​​တွေကြုံ​နေကြရတယ်​….
ဘာသာပြန်​ထားတာ​တွေ ဖတ်​ကြည့်​ ကြက်​သီးထစရာ အဖြစ်​အပျက်​​တွေကြုံ​နေကြရတယ်​….😳😳
ဒါကအမှန်ဆိုရင်တော့ ဒီကျောက်လှိုဏ်ဂူမှာဆရာတော် ဘုရားကြီးတွေပင့် ပုရိတ်ရွတ်၊ ဘုရားစာဆို အမျှ အတမ်း ပေးဝေသင့်ပါတယ်တဲ့။ ဒီတစ်မျိုးပဲလုပ်ပေးရုံနဲ့ ဒီကျောင်းသား ၁၃ ယောက် ရဲ့အတိတ်ဘဝက ကံတွေ၊ ပြုခဲ့သမျှပြန်ခံရမယ့် ဝဋ်ကြွေးတွေကို သက်သာ လာအောင် ဖြေလျော့ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဆရာ ဖလင် ကပြောတာပါ။
ကယ်ဆယ်ရေး တွေအားလုံးဟာ ဒီလိုထူးဆန်းတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေအများကြီးပဲ ကြုံတွေ့လာရပါတယ်တဲ့
၁ ။ အလိုလို မီးပျက်သွားခြင်း၊ သွားစစ်ဆေးကြည့်တော့ လူတွေအများကြီး စောင့်ကြည့်နေကြစဉ်မှာ ဘယ်သူက များ မီးကြိုးကိုလာဖြုတ်သွားတာလဲမသိ။
၂ ။ ဂူအတွင်းဘက်မှ အော်ခေါ်သံတွေကြားရလို့ အဖွဲ့ဝင်တွေသွားကြည့်ကြတော့ ဘာမှလဲမရှိဘူး။
၃ ။ လာကူညီကြတဲ့ စစ်သားတွေမှာ အားလုံးကျန်းမာ အကြမ်းခံနိုင်ရက်နဲ့ တော်တော် များများဟာ ဖျားနာမှုတွေ ဖြစ်ကြတယ်။
၄ ။ ဒီဂူရှေ့မှာ လာနေသူတွေဟာ ည ၉ နာရီ နောက်ပိုင်း ဆိုရင် တောင်ပေါ်က ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ကြောက်စရာ အသံတွေကို ဂူရှေ့အထိ ကြားနေရ ပါတယ်။ အရင်ကရောက်ဖူးသူတွေလည်း ဒီလိုအသံမျိုး ညတိုင်းကြာနေရတတ်ပါတယ်။ ဘာအသံလည်းတော့ မသိကြပါဘူး။
၅ ။ လာကူညီကြတဲ့ စစ်သားတွေက ကိုယ်တွေ့ကြုံလာ ရတော့ ကြောက်ရွံ့ ထိတ်လန့် ချောက်ခြားနေကြ ပါတယ်။ဒီကျောက်လှိုဏ်ဂူကြီးထဲမှာမြင်ရသမျှ အားလုံး ဟာ ကြောက်စရာတွေချည်းပဲ။ နေရာတိုင်းမှာ မျက်စေ့ လည်ပြီး လမ်းမှား စိတ်တုန်လှုပ်စရာတွေကြီးပဲလေ။ အုပ်စုလိုက်သွားတာတောင် ဒီလောက်ကြောက်ဖို့ ကောင်းတာ တစ်ယောက်ထဲတော့ဘယ်မှမသွားရဲ ကြ ပါဘူး။
၆ ။ သူတို့တွေက ဒီဖြစ်ရပ်တွေကို ရယ်မောစရာ ဟာသ အဖြစ်ပဲသတ်မှတ်ထားလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဟာသ မဟုတ်တာကတော့ ဂူရှေ့မှာ အိပ်နေသူတွေ ဟာ ကြောက်မက်ဖွယ် အသံစိမ်းကြီးနဲ့ ညညဆို ထထယောင်နေတတ်ပါတယ်။ ဒါကို သူတို့အဖွဲ့ဝင် တစ်ချို့က အသံသွင်းထားကြပါတယ်။
၇ ။ တရက်မှာတော့ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့ခပ်ဆင်ဆင်လူတစ်ယောက် နဲ့အဖွဲ့ဟာ ဂူထဲကို ရေးကြီးသုတ်ပြာ ဝင်သွားကြပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲတော့ မသိပါဘူး။
ဒီမှာရောက်နေတဲ့ကယ်ဆယ်ရေး အဖွဲ့ဝင် အကုန်လုံးဂူရှေ့ထဲဝင်ပြီး အကြာကြီးပဲပျောက်သွားကြတယ်။
ဒါပေမယ့် မိုးသိပ်ချုပ်နေပြီမို့ ဘယ်သူမှ ထူးခြား သတင်းပေးမှု မလုပ်ကြဘူး။ ပြီးနောက် အဖွဲ့သားအားလုံး လည်း လူရောစိတ်ပါပျော့ခွေ အားလျော့ သွားကြ ပါတယ်။
၈ ။ အရိပ်အမည်းရောင်ကြီးက လူနောက်ကို လိုက် လျှောက်သွားနေတာ၊ တခါတလေရပ်နေတာကို မြင်ရသူလည်းရှိပါတယ်။ဒီလို မြင်ရလွန်းလို့ နေ့လည်ခင်းတောင် တစ်ယောက်ထဲ ဘယ်မှမသွား ရဲကြ ပါဘူး။
၉ ။ မိုးကလည်း တစ်ချိန်လုံးရွာနေတာပဲ။ ဒီဂူမှာပဲရွာတာလေ။ ထူးဆန်းလိုက်တာ။ ဒါကြောင့်မို့ ဘယ်လောက်ပဲ ရေတွေကိုစုပ်ထုတ်ထုတ် ရေက လျော့သွားခြင်း၊ ခမ်းသွားခြင်း မရှိပါ။ သူတို့တွေ လုပ်ထားတာဖြစ်ဖို့များတယ်။
၁၀ ။ ဒါကတော့ အထူးဆန်းဆုံးပဲ။ အစားဝေရင် အစာလာယူသူတချို့ဟာ ဝတ်စားဆင်ယင်ထားတာ လိကေ ( ပြဇာတ် ) ကရင်ဝတ်သလိုမျိုးနဲ့ လှပစွာ လာတာလည်းရှိတယ်တဲ့၊ အစားအစာလာဝေပေးတဲ့ အမကြီးကပြောပြတာပါ။ သူကစဉ်းစားတယ် ဒီလိုလှပစွာဝတ်ပြီး ဒီနေရာကို လာသူတွေလည်း ရှိတာပဲလားပေါ့။ အမှန်မှာ ဒီလာသူတွေဒီလိုမျိုး မဝတ်ထားကြပါဘူး။
၁၁ ။ ပထမဆုံးနေ့က ဒီမြို့ခံလူတွေ အများကြီးပဲ လာကြည့်ကြတယ်။ ဒါပေမယ် ဒီနေ့တော့ ဘယ်သူ မှ မလာကြတော့ဘူး။ တစ်ချို့က ကလေးငယ်လေးတွေ ခေါ်လာကြတယ်။ ကလေးတွေဟာ အိမ်လည်း ပြန်ရောက်ရော ဖျားနာပြီး ဘီလူး၊ သရဲတွေကိုလည်း ယောင်ခေါ်နေတတ်တယ်။ မြို့ခံတွေလည်း ဒီအကြောင်းတွေတစ်ဆင့်တစ်ဆင့် ပြန်ပြောကြရင်း ဘယ်သူမှဒီကိုမလာရဲကြတော့ဘူး။
၁၂ ။ အဖွဲ့သားတွေ အလုပ်လုပ်နေစဉ် အဖျက်အဆီး အနှောင့်အယှက် ဟန့်တားမှုတွေ စိတ်ရှုပ်စရာတွေ အမြဲကြုံနေရတတ်တယ်။ပစ္စည်းသယ်ခြင်း၊ ပို့ခြင်းတို့ စသဖြင့်ပေါ့။ ကားပေါ်ရောက်ရင်လည်း စက်နှိုး လို့ရလိုက် မရလိုက်နဲ့ပေါ့။ လုပ်ရကိုင်ရတာ အဆင် မပြေ ခက်ခဲလွန်းလှပါတယ်။
Via – Thaw Zin Aung
credit #မဝင်းတား ဘာသာပြန်👈
ဘာသာပွနျ​ထားတာ​တှေ ဖတျ​ကွညျ့​ ကွကျ​သီးထစရာ အဖွဈ​အပကျြ​​တှကွေုံ​နကွေရတယျ​….😳😳
ဒါကအမှနျဆိုရငျတော့ ဒီကြောကျလှိုဏျဂူမှာဆရာတျော ဘုရားကွီးတှပေငျ့ ပုရိတျရှတျ၊ ဘုရားစာဆို အမြှ အတမျး ပေးဝသေငျ့ပါတယျတဲ့။ ဒီတဈမြိုးပဲလုပျပေးရုံနဲ့ ဒီကြောငျးသား ၁၃ ယောကျ ရဲ့အတိတျဘဝက ကံတှေ၊ ပွုခဲ့သမြှပွနျခံရမယျ့ ဝဋျကွှေးတှကေို သကျသာ လာအောငျ ဖွလြေော့ပေးနိုငျပါလိမျ့မယျ။ ဆရာ ဖလငျ ကပွောတာပါ။
ကယျဆယျရေး တှအေားလုံးဟာ ဒီလိုထူးဆနျးတဲ့ ဖွဈရပျတှအေမြားကွီးပဲ ကွုံတှလေ့ာရပါတယျတဲ့
၁ ။ အလိုလို မီးပကျြသှားခွငျး၊ သှားစဈဆေးကွညျ့တော့ လူတှအေမြားကွီး စောငျ့ကွညျ့နကွေစဉျမှာ ဘယျသူက မြား မီးကွိုးကိုလာဖွုတျသှားတာလဲမသိ။
၂ ။ ဂူအတှငျးဘကျမှ အျောချေါသံတှကွေားရလို့ အဖှဲ့ဝငျတှသှေားကွညျ့ကွတော့ ဘာမှလဲမရှိဘူး။
၃ ။ လာကူညီကွတဲ့ စဈသားတှမှော အားလုံးကနျြးမာ အကွမျးခံနိုငျရကျနဲ့ တျောတျော မြားမြားဟာ ဖြားနာမှုတှေ ဖွဈကွတယျ။
၄ ။ ဒီဂူရှမှေ့ာ လာနသေူတှဟော ည ၉ နာရီ နောကျပိုငျး ဆိုရငျ တောငျပျေါက ထှကျပျေါလာတဲ့ ကွောကျစရာ အသံတှကေို ဂူရှအေ့ထိ ကွားနရေ ပါတယျ။ အရငျကရောကျဖူးသူတှလေညျး ဒီလိုအသံမြိုး ညတိုငျးကွာနရေတတျပါတယျ။ ဘာအသံလညျးတော့ မသိကွပါဘူး။
၅ ။ လာကူညီကွတဲ့ စဈသားတှကေ ကိုယျတှကွေုံ့လာ ရတော့ ကွောကျရှံ့ ထိတျလနျ့ ခြောကျခွားနကွေ ပါတယျ။ဒီကြောကျလှိုဏျဂူကွီးထဲမှာမွငျရသမြှ အားလုံး ဟာ ကွောကျစရာတှခေညျြးပဲ။ နရောတိုငျးမှာ မကျြစေ့ လညျပွီး လမျးမှား စိတျတုနျလှုပျစရာတှကွေီးပဲလေ။ အုပျစုလိုကျသှားတာတောငျ ဒီလောကျကွောကျဖို့ ကောငျးတာ တဈယောကျထဲတော့ဘယျမှမသှားရဲ ကွ ပါဘူး။
၆ ။ သူတို့တှကေ ဒီဖွဈရပျတှကေို ရယျမောစရာ ဟာသ အဖွဈပဲသတျမှတျထားလိုကျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဟာသ မဟုတျတာကတော့ ဂူရှမှေ့ာ အိပျနသေူတှေ ဟာ ကွောကျမကျဖှယျ အသံစိမျးကွီးနဲ့ ညညဆို ထထယောငျနတေတျပါတယျ။ ဒါကို သူတို့အဖှဲ့ဝငျ တဈခြို့က အသံသှငျးထားကွပါတယျ။
၇ ။ တရကျမှာတော့ အုပျခြုပျရေးမှူးနဲ့ခပျဆငျဆငျလူတဈယောကျ နဲ့အဖှဲ့ဟာ ဂူထဲကို ရေးကွီးသုတျပွာ ဝငျသှားကွပါတယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲတော့ မသိပါဘူး။
ဒီမှာရောကျနတေဲ့ကယျဆယျရေး အဖှဲ့ဝငျ အကုနျလုံးဂူရှထေဲ့ဝငျပွီး အကွာကွီးပဲပြောကျသှားကွတယျ။
ဒါပမေယျ့ မိုးသိပျခြုပျနပွေီမို့ ဘယျသူမှ ထူးခွား သတငျးပေးမှု မလုပျကွဘူး။ ပွီးနောကျ အဖှဲ့သားအားလုံး လညျး လူရောစိတျပါပြော့ခှေ အားလြော့ သှားကွ ပါတယျ။
၈ ။ အရိပျအမညျးရောငျကွီးက လူနောကျကို လိုကျ လြှောကျသှားနတော၊ တခါတလရေပျနတောကို မွငျရသူလညျးရှိပါတယျ။ဒီလို မွငျရလှနျးလို့ နလေ့ညျခငျးတောငျ တဈယောကျထဲ ဘယျမှမသှား ရဲကွ ပါဘူး။
၉ ။ မိုးကလညျး တဈခြိနျလုံးရှာနတောပဲ။ ဒီဂူမှာပဲရှာတာလေ။ ထူးဆနျးလိုကျတာ။ ဒါကွောငျ့မို့ ဘယျလောကျပဲ ရတှေကေိုစုပျထုတျထုတျ ရကေ လြော့သှားခွငျး၊ ခမျးသှားခွငျး မရှိပါ။ သူတို့တှေ လုပျထားတာဖွဈဖို့မြားတယျ။
၁၀ ။ ဒါကတော့ အထူးဆနျးဆုံးပဲ။ အစားဝရေငျ အစာလာယူသူတခြို့ဟာ ဝတျစားဆငျယငျထားတာ လိကေ ( ပွဇာတျ ) ကရငျဝတျသလိုမြိုးနဲ့ လှပစှာ လာတာလညျးရှိတယျတဲ့၊ အစားအစာလာဝပေေးတဲ့ အမကွီးကပွောပွတာပါ။ သူကစဉျးစားတယျ ဒီလိုလှပစှာဝတျပွီး ဒီနရောကို လာသူတှလေညျး ရှိတာပဲလားပေါ့။ အမှနျမှာ ဒီလာသူတှဒေီလိုမြိုး မဝတျထားကွပါဘူး။
၁၁ ။ ပထမဆုံးနကေ့ ဒီမွို့ခံလူတှေ အမြားကွီးပဲ လာကွညျ့ကွတယျ။ ဒါပမေယျ ဒီနတေ့ော့ ဘယျသူ မှ မလာကွတော့ဘူး။ တဈခြို့က ကလေးငယျလေးတှေ ချေါလာကွတယျ။ ကလေးတှဟော အိမျလညျး ပွနျရောကျရော ဖြားနာပွီး ဘီလူး၊ သရဲတှကေိုလညျး ယောငျချေါနတေတျတယျ။ မွို့ခံတှလေညျး ဒီအကွောငျးတှတေဈဆငျ့တဈဆငျ့ ပွနျပွောကွရငျး ဘယျသူမှဒီကိုမလာရဲကွတော့ဘူး။
၁၂ ။ အဖှဲ့သားတှေ အလုပျလုပျနစေဉျ အဖကျြအဆီး အနှောငျ့အယှကျ ဟနျ့တားမှုတှေ စိတျရှုပျစရာတှေ အမွဲကွုံနရေတတျတယျ။ပစ်စညျးသယျခွငျး၊ ပို့ခွငျးတို့ စသဖွငျ့ပေါ့။ ကားပျေါရောကျရငျလညျး စကျနှိုး လို့ရလိုကျ မရလိုကျနဲ့ပေါ့။ လုပျရကိုငျရတာ အဆငျ မပွေ ခကျခဲလှနျးလှပါတယျ။
ถ้าแบบนี้จริง ต้องอำนาจพุทธานุภาพขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับการอาศัยบุญ สวดมนต์ ทำบุญให้มากตรงนั้น อย่าครั้งเดียว เซ่นไหว้ บวงสรวงไม่ใช่ กับข้อสำคัญแก้ไขกรรมก่อน …อ.พรีม
1. อยู่ๆ ไฟก็ดับเอง ไปดูไม่รู้ใครมาดึงสายออกทั้งๆที่มีคนยืนคุมตลอด
2. มีเสียงเรียกออกมาจากในหลืบ พอทีมไปถึงก็ไม่มีอะไร
3. ทหารที่ไปช่วยงาน ไม่สบายหลายคน ทั้งๆที่ทุกคนร่างกายแข็งแรงดี
4. คนที่มาอยู่หน้าถ้ำหลังจาก3ทุ่มขึ้นไป จะได้ยินเสียงแว่วๆ ออกมาจากที่ไกลๆบนเขา ทางด้านปากถ้ำกันทุกคน อันนี้ถามคนที่เคยไปจะได้ยินกันทุกคืน แต่ไม่รู้เสียงอะไร
5. ทหารที่มาช่วย จริงๆก็กล้าๆกลัวๆ เพราะในถ้ำบรรยากาศวังเวงมาก ทุกซอกหลืบมันเป็นที่บังตาเปล่าเปลี่ยวไปหมด เดินเป็นกลุ่มยังน่ากลัว ไม่มีใครกล้าเดินไปไหนคนเดียว
6. นอกจากร่างทรงที่มาแล้ว พวกนั่นมองดูเป็นเรื่องตลก แต่ที่ไม่ตลกคือคนที่มานอนหน้าถ้ำ ละเมอด้วยเสียงแปลกๆโหยหวนสยองมาก บางคนถ่ายคลิปไว้ด้วย
7. วันหนึ่ง บุคคลคล้ายๆท่านผู้ว่าและคณะรีบวิ่งลงไปในถ้ำ ไม่รู้สาเหตุอะไร ทีมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหายลงไปหน้าถ้ำนานมาก แต่ไม่มีใครให้ข่าวอะไรเพราะดึกแล้ว และทุกคนอ่อนเพลียกันหมด
8. มีคนเห็นเงาดำๆ เดินตามบ้าง ยืนอยู่บ้าง แทบจะทุกที่ เห็นกันจนไม่มีใครกล้าเดินไปไหนคนเดียว แม้แต่เวลากลางวัน
9. ฝนตกตลอดเวลา ตกเฉพาะตรงถ้ำนี่เท่านั้น มันน่าแปลก นี่อาจทำไห้สูบน้ำเท่าไหร่ก็ไม่แห้งไม่ลดลงเลย
10. อันนี้แปลกมาก แม่ครัวที่ทำอาหารมาเลี้ยง บอกว่าคนที่มารับอาหาร บางคนมาแบบแต่งตัวสวยงามเหมือนลิเกก็มี บางทีนึกว่าพวกร่างทรง และมากันมากมาย ทั่งๆที่ร่างทรงที่มากันไม่มีใครแต่งชุดสวยๆแบบนั้นเลยสักคน
11. วันแรกๆชาวบ้านคนมาดูกันมากมาย แต่วันนี้ไม่มีใครมาเลย บางคนพาลูกเล็กๆมา พอกลับบ้านไป ก็ไม่สบายนอนละเมอถึงยักษ์บ้าง ผีบ้าง ชาวบ้านเล่าต่อกันจนไม่มีใครกล้ามา
12. การทำงานของทีมงาน มีอุปสรรคตลอด ไม่ว่าจะเป็นการขนของ ขนส่ง อยู่รถก็สตาร์ทไม่ติดบ้าง ติดหล่มบ้าง การทำงานลำบากมาก